वारेन बफेटभन्दा पनि बढी सिपालु पिटर लिन्च, यस्ता छन् लिन्चका लगानी मन्त्र
काठमाडौं : सेयर बजारका लगानीकर्ता प्रायः सबैले वारेन बफेटको नाम सुनेका छन् । उनका बारेमा धेरैथोरै पढेका पनि हुन्छन् । अधिकांश लगानीकर्ताले बफेटकै लगानी सिद्धान्तलाई मन्त्र बनाएका पनि पाइन्छ । बफेट सफल लगानीकर्ता भएकामा कसैको दुई मत छैन । तर यो अंकमा हाम्रो प्रसंग अलिफरक छ । तपाईंले पिटर लिन्चको नाम सुन्नुभएको छ ? हुन सक्छ, कतिपयले नसुनेको । किनभने सञ्चारमाध्यममा पिटर लिन्च जत्तिको छाएका छैनन् । तर पुँजी बजारका अध्ययताहरू भन्छन्, लगानीमा पिटर लिन्च वारेन बफेटभन्दा पनि बढी सफल छन् । पिटरको कमाई सेयर र फन्ड व्यस्थापनबाटै हो । त्यसो भए पिटरका बारेमा पनि केही थाहा पाउँन त है ? प्रस्तुत छ, हाम्रा सहकर्मी समिर गौतमले एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारेका यो सामाग्री :
सन् १९४४ मा अमेरिकामा जन्मेका पिटर लिन्चले १० वर्षको उमरमै आफ्ना पिता गुमाएका थिए । सन् १९६६ मा अमेरिकी वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था ‘फिडालिटी इन्भेस्टमेन्टस्’मा इन्टर्नको रूपमा काम गर्दा पिटर लिन्च केवल २२ वर्षका युवा थिए । त्यति बेला फिडालिटी इन्भेस्टमेन्टस्का प्रमुख डी. जर्ज सुलेभन थिए र उनले गल्फ खेल्दा लिन्चलाई आफ्ना सहयोगीको रूपमा राखेका थिए । पछि यही लिन्चका लागि फिडालिटी इन्भेस्टमेन्टस्मा प्रवेश गर्ने र स्टक मार्केटमा हात हाल्ने एक अवसर भयो ।
दुइ वर्ष सेनामा जागिर खाएपछि त्यो छाडेर सन् १९६८ मा पिटर लिन्च फिडालिटीको अनुसन्धान विश्लेषक भएर काम गर्न थाले । यही अनुसन्धानको कामसँगै उनले लगानी पनि गर्न थालिसकेका थिए । २५ वर्षको उमेर हुँदा लिन्च बार्षिक १६ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न थालिसकेका थिए । अनुसन्धान विश्लेषक भएर काम गर्दा उनले टेक्सटाइल र रसायनदेखि खानी क्षेत्रका उधोगहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्थे । सन् १९७७ बाट उनी फिडालिटीको ‘म्यागेलन म्युचुअल फन्ड’को पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न थाले । उनले १३ वर्षसम्म म्यागेलनमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको काम गरे ।
उनले सुरु गर्दा यस कम्पनीको फन्डमा जम्मा १८ करोड डलर थियो । १९९० मा म्यागेलन छाड्ने बेलामा लिन्चले त्यो फन्डको आकार झन्डै दुइ अर्ब डलरको पुर्याएका थिए । फोब्र्सका अनुसार पिटर लिन्चको आफ्नो १३ बर्षे कार्यकालमा औषत बार्षिक लगानीमा प्रतिफल २९.२ प्रतिशत थियो । यस अर्थमा हेर्दा उनले म्यागेलन सम्हाल्दा कसैले एक हजार डलर लगानी गरेको थियो भने उनले छोड्ने बेला त्यो २८ हजार डलरको बनाइदिएका थिए । त्यसैले पनि हुनसक्छ, वाल स्ट्रिट जर्नलले लिन्चलाई ‘म्युचुअल फन्डका रकस्टार’ भनेको ।
पिटर लिन्चलाई लगानी गुरु भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ । उनले जोन रोथचाइल्डसँग मिलेर तीन वटा पुस्तक पनि प्रकाशन गरेका छन् । उनको ‘वान अप अन वाल स्ट्रिट’ भन्ने पुस्तक लगानीकर्ताले पढ्नै पर्ने मानिन्छ । पिटर लिन्चको लगानी गर्ने मन्त्र सामान्य थियो । ‘जे विषयमा ज्ञान छ त्यसैमा लगानी गर्नू’ भन्ने उनको पहिलो धारणा थियो । लिन्चका महत्वपूर्ण केही लगानीका सिद्धान्त यस्ता छन् ।
आफुले बुझेको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने : लिन्चका अनुसार सेयर बजार विश्लेषण गर्ने सबैभन्दा ठूलो साधन हाम्रा आँखा, कान र व्यावहारिक ज्ञान नै हुन् । लिन्च आफू पनि कतिपय स्टकका आइडिया बाटो हिड्दाहिड्दै वा साथीभाईसँग कुरा गर्दागर्दै फुरेकोमा गर्व गर्छन् । त्यसैले उनी आफूले बुझेको विषयमा मात्र लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
सधैँ गृहकार्य गर्ने : पहिलो पटकको निरीक्षण र प्रमाण निकै उपयोगी हुन सक्छन् तर तिनलाई थप अध्ययन र अनुसन्धान पनि गरिरहनुपर्ने लिन्च बताउँछन् ।
बिक्री प्रतिशत : यदि कुनै कम्पनीको वस्तु वा सेवाले तपाईंलाई आकर्षित गर्छ भने यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि त्यो वस्तु वा सेवाको बिक्री प्रतिशत उल्लेख्य होस् । अझ सजिलोसँग भन्दा त्यसमा नाफा वा मार्जिन निकै बढी होस् । अनि, कनुै पनि वस्तु राम्रो छ, उत्पादन पनि राम्रो छ तर बिक्री प्रतिशत कम छ भने त्यसले खासै राम्रो नतिजा ल्याउन सक्दैन ।
मूल्य–आम्दानी अनुपात : बजारमा कुनै पनि कम्पनीको सेयर भाउमाथि कति आशा राखिएको छ भन्ने हेर्न आम्दानी वृद्धिदर हेर्नुपर्ने लिन्चको भनाई छ । राम्रो आम्दानी वृद्धिदर र तर त्यस अनुपातमा सकेसम्म कम भाउ भएका कम्पनीको खोजी गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, पिटर लिन्च भन्छन् ।
नगद स्थिति मजबुत भएका र ऋण अनुपात औषत भन्दा कम भएका कम्पनीलाइ चुन्ने : मजबुत नगद प्रवाह र सावधानीपूर्वक सम्पतिको व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीलाई सबैखाले बजार माहोलमा विकल्प हुने लिन्चको लगानी मन्त्रले भन्छ ।
दीर्घकालीन लगानी गर्ने : छोटो समयको बजार उतारचढावका बारेमाण् भाविष्यवाणी गर्न खोज्नु लाभदायी नहुने लिन्चको विश्वास छ । लिन्चको ‘टेनब्यागर’ भन्ने शब्द यहाँ निकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । उनले यो शब्दको प्रयोग स्टकको मूल्यमा १० गुणाले हुने वृद्धिलाई जनाउन प्रयोग गरेका थिए । त्यसैले उनी लामो समयका लागि लगानी गर्नु नै उचित ठान्छन् र उनले फिडालिटीमा हुँदा त्यसै गरे जसले औषतभन्दा बढी नाफाको मौका दिन्थ्यो ।
पिटर लिन्चले सक्रिय लगानी पेसाबाट अवकाश लिए भनिन्छ, उनी अहिले लोककल्याणकारी काममा लागिपरेका छन् । पैसाको व्यवस्थापनमै जीवन बिताएका उनी अहिले लिन्च फाउन्डेसनमार्फत गरिबदुःखीको सहयोगका लागि पैसा खर्च गरिरहेका छन् । उनका पुस्तकहरू र लगानीका सिद्धान्त सेयर बजारमा लाग्ने जोसुकैलाई अति नै उपयोगी अनि मार्गदर्शक हुन सक्छ । पिटर लिन्च साँच्चिकै एक सफल लगानीकर्ता हुन् र उनको पथलाई पछ्याउन सके लगानीकर्ताले पुँजी बजारमा धेरै सिक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।